Dowladda iyo xisbiga Doogga oo isku afgartay sharciga degganaanta ee dhallaanka qaxootiga ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dowladda iyo xisbiga Doogga oo isku afgartay sharciga degganaanta ee dhallaanka qaxootiga ah
La daabacay onsdag 22 januari 2014 kl 10.10
Dowladda iyo xisbiga Doogga ama Miljöpartiet ayaa isku afgartay in dhallaanka qaxootiga ah oo keligood yimid loo fududeeyo in ay sharci degganaansho ka helaan Iswiidhen. Waxaana la filayaa in heshiiskaan dhexmaray dowladda iyo xisbiga Dooggu uu keeno in dhallaan badan oo magalgelya-doon ah ay Iswiidhen ku negaadaan. Sidaasna waxaa caddadkiisii maanta ku soo daabacay wargeyska Svenska Dagbladet.
Afhayeenka xisbiga Doogga Maria Ferm ayaa u aragta in sharciga loo isticmaalo si adag, balse ay hadda ku faraxsan tahay heshiiskaan cusub oo la isla gaaray.
– Heshiiskani waa mid muhiim ah maadaama uu la micne yahay isbeddel la taaban karo marka laga hadlayo dhallaanka magangelyadoonka ah oo maray xaalado adag, ayey tiri Maria Ferm.
Dhabbatusyadaan cusub waxaa ku jira fursado si gaar ah loogu eego karo xaalado xasaasi ah oo gundhig u noqon kara si magangelyo loo siiyo dhallaanka iyo dhallinyarada magangelya-doonka ah.
Haddii ilmo ku sugan Iswiidhen uu qabo cudur halis ah oo haddii daaweyntiisa carqaladi gasho cawaaqib weyn ku reebi karta xaaladda cudur ee ilmaha.
Haddii ilmo uu dalkiisa hooyo horay uga la soo kulmay dhacdooyin xunxun oo dhibaatooyin naftiisa halis geliyey, oo sidaas awgeed ay in dib loogu celiyaa uga sii dari karto.
Haddii ilmahaas ay wareegeen hay’adaha gargaarka bulshada ee Iswiidhen.
Haddii ilmo aan cidna ku lahayn dalkiisa hooyo, uu dad uu la xiriiro ka helo Iswiidhen, oo haddii uu waayo xiriirkaas dadka ay khatar gelin karto koritaankiisa.
Heshiiskaan cusubi wuxuu dabasocdey heshiis ay dowladda iyo xisbiga Dooggu gaareen gu’gii la soo dhaafay oo ku saabsanaa in sharciga ajnebiga wax laga beddelo si shuruudda dalka lagu joogo laga beddelo xaalado u muuqada xasaasi oo loo beddelo xaalado si gaar ah xasaasi u ah.
Qiimeynta mar walba la sameynayana waxaa qayb ka ahaanaya inta ilmahaasi Iswiidhen ku noolaa iyadoo aan waqti loo xaddadin sababaha asaasiga ah oo dalka magangelyo looga heli karo.
– Waxaase muhiim ah in la xasuusnaado in haddii uu ilmuhu yahay mid Iswiidhen ku dhashay oo ku soo barbaaray ay dib u celintu noqon karto mid dhibaato weyn keenta. Qof ahaan waxaa la soo kulmay dhallaan badan oo waqti dheer ku soo noolaa Iswiidhen, oo ay iigu la muuqato wax aan caqliga geli karin haddii aan loo oggolaan in ay dalka joogaan, ayey Maria Ferm (MP) intaas ku dartay.